Ibu ibu | KONGOLISOLO
Enweghị mmetụta n’aha Jizọs Kraịst, ụmụ nwanyị dị ime ekwesịghị ilele foto a biko
Site na: KongoLisolona: August 25, 2017 04: 51 Enweghị asịsa
Ibu ahụ site na doping nke FUFU rụpụtara ihe na-emegide ya, kama mọzụlụ, mana ọ bụ afọ nke were olu… Lol!	GỤKWUO
Otu esi ewepu nchegbu echekwara n'ime ahụ anyị
Site na: KongoLisolona: July 11, 2017 12: 30 Enweghị asịsa
Ị na-etinye oge dị ukwuu n'ihu kọmputa, n'azụ mgbochi, n'ụgbọala, ma ọ bụ na ọfịs? Ọ bụrụ na azịza gị bụ ee, mgbe ahụ, a ga-emetụta ihe mkpuchi gị, nke ...	GỤKWUO
Enweghị anụ ahụ ọzọ, ndewo "afọ na-eme biya": ihe dị ịtụnanya metamorphosis nke ndị a 9 lara ezumike nka bodybuilders!
Site na: KongoLisolona: March 16, 2017 00: 13 Enweghị asịsa
Bebụ onye na-ewu ụlọ bụ ilekọta ahụ gị. Agbanyeghị, okwu a abaghị uru ọ bụla ozugbo ọrụ ahụ agwụla, ihe dị mma! Ndị a 9 bụbu bodybuilders nwere n'ezie ...	GỤKWUO
Ngwunye mmanu n'ime akwara ... (VIDIO)
Site na: KongoLisolona: January 8, 2017 05: 50 Enweghị asịsa
Ntughari: Injections nke "mmanụ" n'ime akwara iji mee ka ha dịkwuo	GỤKWUO
Dwayne Douglas Johnson (nkume)
Site na: KongoLisolona: Disemba 1, 2016 16: 24 Enweghị asịsa
A mụrụ 2 May 1972 na California nke nna nna Afrika na Amerịka. Ọ bụ karịsịa onye nketa nke nna, Rocky Johnson, Onye Mbụ Na-achị Ụwa site na American-American Team, nwere ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: July 5, 2016 07: 46 Enweghị asịsa
Amụrụ ya na 1938 wee nwụọ na 2011. Akpọrọ “nduru ojii”, onye ama ama ama na ihe ọkpụkpọ plastik, ụfọdụ na-ele ya anya dịka otu n'ime ndị kachasị mara mma na agba egwu ...	GỤKWUO